दुःखद खबर – सानो गल्तीले सांसद जोशीकी परी जस्ती नातिनीले संसार छोडेर विदा भइन्! खासमा के भएको रहेछ हेर्नुहोस!! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > दुःखद खबर – सानो गल्तीले सांसद जोशीकी परी जस्ती नातिनीले संसार छोडेर विदा भइन्! खासमा के भएको रहेछ हेर्नुहोस!!
एजेन्सीी । जीवनमा मानिसले त्यस्ता गल्तिहरु गर्छन् जसलाई चाहेर पनि कहिल्यै भुल्न सम्भव हुँदैन । त्यस्ता घटनाहरु तपाईंको आँखामा क्षण–क्षणमा दृश्यका रुपमा रहिरहन्छ । यस्तै घटना अहिले बाहिर आएको छ । तपाईंले अहिले यो समाचारमा देखि रहनुभएकी बालिका यो संसारमा अब रहिनन् ।
तिहारको रौनकतामा रमाउँदा–रमाउँदै उनले यो संसार छोडेर सदाका लागि विदा भएकी छिन् । आफ्ना आमाबाबु, हजुरआमा र हजुरबुवा लगायत सबैलाई छोडेर यो संसारबाट सदाका लागि विदा भएर गएकी छिन् ।
उनको स्वास्थ्य बिग्रँदा सांसदलाई आईसीयूमा भर्ना गर्नुपरेको हो । १५ सेप्टेम्बरमा, उनी आईसीयूबाट बाहिर आए र अस्पतालमा नै उनको श्रीमानको जन्मदिन मनाईन्